IPirates inyomfe izinhlelo zoSuthu - Ilanga News
Home Ezemidlalo IPirates inyomfe izinhlelo zoSuthu
UBenni ukhale ngenkunzi bewashiswa ijezi kwiNedbank
UBONGI Ntuli woSuthu emakwa ngu-Olisah Ndah wePirates enqobe ngo-1-0 kowe last 32 yeNedbank Cup izolo e-Orlando Stadium, eGoli
PHILANI NCALANE NOSENZO SOKHELA
KUNYOMFEKE izinhlelo zamaZulu FC ehlulwa yi-Orlando Pirates ngo-1-0 wegoli likaDeon Hotto emdlalweni we-last 32 kwiNedbank Cup izolo ngeSonto ntambama eOrlando Stadium, eSoweto. USuthu kucacile ukuthi bekungelona usuku lwalo njengoba lulitholile ithuba lokulinganisa ngesikhathi lunikwa iphenathi sekuzophela umdlalo, ethathwe nguTapelo Xoki nokho wakwazi ukuyivimba uSiyabonga Mpontshane ezintini zeBucs. IBucs yiyona eqale lo mdlalo ngegiya eliphezulu njengoba uGoodman Mosele ecishe wavalela igoli umdlalo usanda kuqala. Ngemuva kokushweba leli thuba, uMosele ungqutshuzwe yibhola esebhokisini kodwa unompempe wathalalisa ukunika uSuthu iphenathi ngesiwombe sokuqala.
UBenni McCarthy ololonga uSuthu, obedinwe eqhuma emuva komdlalo, ukhale ngokungabi bikho kobulungiswa ebholeni lakuleli. “Ukuba bekunobulungiswa ebholeni lakuleli ngabe kukhulunywa enye into kodwa kubi ngoba ibhola lifa kubuka izwe lonke. Sincishwe amaphenathi amathathu abecacile sazonikwa eyodwa sesikhohliswa, kakubona ubulungiswa lobo. “Kubuhlungu ukubona ikilabhu yakho ihlulwa ngalolu hlobo. Kodwake thina kasihlulwanga yizimbangi zethu, sihlulwe yile ndoda ebiphakathi nendawo lokho ngeke ngikunanaze,” kusho uMcCarthy. UMandla Ncikazi ololonga iBucs, uthi bekufanele bawunqobe lo mdlalo ngoba bebewuthwele. “Ngikholwa wukuthi kulo mdlalo kubonakale iPirates ibuya kanti nabadlali bethu abebelimele baya ngokubuya kancane kancane. Ngaphandle kwephenathi abayithole umdlalo usuyophela, kakukho okunye abakwenzile emdlalweni,” kusho uNcikazi.
Previous articleSigonyuluka ngombango waseNdlunkulu iSilo
Next articleUkhuthaza imfundo kosomatekisi